I-Pheasant Breeds | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba I-Pheasant Breeds
7 izinhlobo ezihle kakhulu zezinhlanzi
Eminyakeni eminingi edlule, izakhamuzi zasemizaneni eseduze noMfula iPhasis eGrisi lasendulo zaqala ukuhlakulela izinyoni ezinhle kakhulu, inyama yazo enambitheka kakhulu. Kukholelwa ukuthi ama-pheasants athola igama lawo egameni lomfula u-Fasis, eduze nalapho aqala ukuboshwa khona ekhaya. I-Pheasants yilabo abamele kakhulu kunazo zonke izinkukhu zezinkukhu.
I-Golden pheasant ekhaya: indlela yokuzala nokudla
Kwabaqalayo, ukuzalela ekhaya kubonakala kunzima kakhulu futhi akusiyo njalo inqubo ephumelelayo. Kodwa eqinisweni, le nyoni yokuhlobisa ayifani kakhulu nezinkukhu ezijwayelekile futhi iyabukeka unyaka wonke emgodini ovulekile. Indlela yokuhlela i-pheasants ebusika obuphephile ezimweni ezinzima zezulu, ukuthi yini ongayidla, indlela yokugwema ukufa nokukhulisa inzalo encane - sizoxoxa ngakho konke lokhu kamuva esihlokweni.
Ama-White pheasants: ukuthi abukeka kanjani, lapho ahlala khona, ukuthi yini abayidlayo
Ukuze izifundisi zeqiniso zezinyoni eziyingqayizivele, i-pheasant emhlophe ingaba umhlobiso wangempela wegceke, ngoba, ngaphandle kokubonakala kwayo okukhangayo, ihlukaniswe ngomusa wayo nokulula okuqhathaniswayo ekunakekeleni kwayo. Yini ebonakalayo njenge-white ered ephasant? Abalimi abaningi bezinkukhu bakhetha lokhu okuhlukahlukene ngenxa yombala wayo omuhle, futhi ngaphansi kwezimo ezinhle zokugcina imifino izohlale ihlanzekile emhlophe.
Ama-pheasants e-Eared: incazelo, isithombe
Ama-pheasants e-Ears abhekwa njengabamele abakhulu kunabo bonke, futhi phakathi kwamanye amaqembu avela ekubukeni kwabo okungajwayelekile. Ukuzihlobisa kwabo akukhona kuphela emagqumeni anemibala, kodwa futhi nesakhiwo somzimba. Yiziphi izici zaleli nyoni, ukuthi limelelani ekunakekeleni nasekugcinweni - funda okunye kulesi sihloko.
I-Royal pheasant: ukuthi kubonakala kanjani, lapho ihlala khona, lokho okukudlayo
I-Pheasants yizinyoni ezinhle kakhulu nezinhle, kodwa, ngeshwa, ubuhle babo bubacekele phansi. Ukuzingela ama-pheasants sekuyisikhathi eside kuleso simo esithandwa kakhulu, ngoba abazingeli abakhangwanga kuphela ngamapulangwe amahle, kodwa futhi banethemba lokudla umdlalo okumnandi. Ezinye zezinhlobo ze-pheasants sezivele zimbalwa kakhulu futhi abantu baqala ukucabanga ngokuzala kwabo.
I-Common Pheasant: ukuthi kubonakala kanjani, lapho ihlala khona, lokho okudlayo
Namuhla sizokhuluma nge-pheasant - inyoni, okuyinto yokuzingela ethandwayo, kanye nokufanekisa eNingizimu Dakota e-United States. Le nyoni enhle kakhulu iyisihlobo senkukhu ejwayelekile futhi izwa kahle kakhulu epulazini lomlimi. Endaweni yakithi, kokubili izilwane zasendle nezilwane ezifuywayo zibukeka zingavamile, kodwa kungenzeka ukuba zizalwe lapha.